Kutheni iipaneli zealuminium ezidityanisiweyo zithandwa kangaka?
Ukumelana nemozulu ephezulu ye-1.I-ACP nokuba yeyiphi na kubushushu obuphezulu belanga okanye kwiintsuku ezinekhephu elinamaqondo asezantsi ayizukuvela monakalo wendalo, ngokubanzi kule meko inokusetyenziselwa iminyaka elishumi ngaphandle kokuphela Umzekelo, akukho ukukhanya okukhanya okuqinileyo, akukho bushushu buphantsi kakhulu, kwaye inokuba yim ...
Ngaba usasebenzisa ifomu yeplywood yokwakha? Ifom yeAluminiyam: Uphelelwe lixesha
I-Aluminium formwork yifom yesizukulwane sesine emva kweplywood formwork, formwork yensimbi, kunye nefomwork yeplastiki. Xa kuthelekiswa nezizukulwana zayo zangaphambili, inezibonelelo zobunzima bokukhanya, ukuqina okuphezulu, kunye nokusebenza kwakhona okuphezulu. I-aluminium formwork inobunzima obulula phakathi kwe-exis ...
Ukwahlula i-ringlock scaffolding engaphantsi kwinqanaba le-ringlock scaffolding
I-Ringlock scaffolding ineempawu zokuqina kokuqina, ukusebenza ngokukuko, ukuthwala amandla, ukhuseleko kunye nokuthembeka, kwaye akukho lula ukudala iingxaki ngexesha lokusetyenziswa. Ukulayisha kunye nokulayishwa kulula kwaye kulula, kwaye kulungele ukugcinwa. Ezi zibonelelo zenza i-ringloc ...
Umkhwa wokutsala iringlock sele ucacile, kwaye isikali kulindeleke ukuba sidlule kwi-yuan ye-170 yezigidigidi ngo-2027!
Ukuthetha nge-ringlock scaffolding, imeko yayo yophuhliso sele icacile. Okwangoku, amaphondo amaninzi kunye nezixeko ziye zazisa imigaqo-nkqubo yokuphumeza i-ringlock scaffolding, kubandakanya iBeijing, iShanghai, iShenzhen, iJiangsu, iHubei, njl., Uhlobo lwesocket ringlock scaffolding lubotshelelwe ...
Inkcazo yokwakhiwa kwe-ringlock scaffolding, isicwangciso sokwakha i-ringlock scaffolding! Izinto zobunjineli abantu ekufuneka bezazi!
Phambi kolwakhiwo lwesakhelo se-ringlock, isicwangciso sokwakha i-ringlock scaffolding kufuneka senziwe. Isicwangciso sokwakha senziwe ngokungqinelana nenqaku le-ringlock scaffolding. Makhe siqwalasele amanye amanqaku aphambili kwinkcazo ye-ringlock scaffolding. Kuqala ...
Heavy Duty Ringlock banikwe, IiPropati zoKwakha zoLwakhiwo eziQinisekayo, Izixhobo zeKwikstage Scaffolding, Isibiyeli seBhendi yesandi, Banikwe Screw Adjustable Screw, Ringlock banikwe Izahlulo,